တကယ့်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေမှာ မရှိတဲ့ အမူအကျင့် (၆) မျိုး
29 Aug 2018 . 12:12 PM
တကယ့်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေက ဒီလိုအကျင့်စရိုက်တွေ မရှိဘူး
ဗုဒ္ဓဆိုတာ တရားအားလုံးကို ကိုယ်ပိုင်ဥာဏ်နဲ့ သိမြင်တဲ့သူဖြစ်ပြီး ဘာသာဆိုတာက ဗုဒ္ဓဟောကြားခဲ့တဲ့ တရားတော်လို့ ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဆိုတာက ဗုဒ္ဓဟောကြားခဲ့တဲ့ တရားတော်တွေကို လိုက်နာကျင့်သုံးတဲ့သူလို့ အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ မိရိုးဖလာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နဲ့ တကယ့်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဆိုပြီး နှစ်မျိုးကွဲပါသေးတယ်။ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားထဲမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်လို့ ရေးထားတိုင်းလည်း ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အစစ် မဖြစ်သေးပါဘူး။ ဒီလိုအကျင့်စရိုက်မျိုးတွေရှိနေသမျှတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အစစ်မဖြစ်သေးပါဘူး။
(၁) ဗေဒင်၊ လက္ခဏာကိုလည်း မမေးဘူး။
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဆိုတာ ကံကိုပဲ ယုံကြည်တယ်။ ကောင်းတာလုပ်ရင် ကောင်းတာဖြစ်မယ်၊ မကောင်းတာလုပ်ရင် မကောင်းတာဖြစ်မယ်။ မွေးဇာတာကိုကြည့်ပြီး ကိုယ့်အနာဂတ်ကို နမိတ်ဖတ်တာက အပြည့်အဝမှန်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ လက်ချောင်းတွေမှာရှိတဲ့ အရေးအကြောင်းတွေကို ကြည့်ပြီး “အသက်လမ်းကြောင်း တိုနေလို့ အသက်တိုမယ်” လို့ ဆိုကြစတမ်းဆိုရင် မွေးကတည်းက လက်နှစ်ဖက်မပါတဲ့သူတွေက အသက်ရှင်ခွင့်မရှိတော့ဘူးလား။
(၂) နတ်တွေကိုလည်း မယုံကြည်ဘူး။
ကိုယ့်ကိုကျွေးမွေးပြုစုလာတဲ့ မိဘနှစ်ပါးကို အလေးမထားဘဲနဲ့ အတွင်း၃၇မင်း၊ အပြင်၃၇မင်း နတ်တွေကိုပဲ ပသနေရင် မဟုတ်သေးပါဘူး။ တကယ်တမ်းတော့ ကိုကြီးကျော်နတ်တို့ မောင်တင့်တယ်တို့ မင်းကြီးမင်းလေးတို့ဆိုတာ အသတ်ခံရတဲ့ အစိမ်းသေပြိတ္တာအဆင့်ပဲ ရှိတာပါ။ သူတို့ဘဝတွေကို သနားရင် အမျှအတန်းပေးဝေလို့ ကောင်းပေမယ့် အကျိုးမျှော်ကိုးပြီး ပူဇော်ပသနေရင်တော့ ဗုဒ္ဓဘာသာအစစ်မဟုတ်သေးပါဘူး။
(၃) နေ့နံအလိုက်လည်း ဘုရားမရှိခိုးဘူး။
အင်္ဂါသားဖြစ်လို့ အင်္ဂါထောင့်မှာ ကန်တော့တာတို့ စနေသမီးဖြစ်လို့ စနေထောင့်မှာ ရေသပ္ပာယ်တာတို့ဆိုတာ မဖြစ်သင့်ပါဘူး။ ဘုရားဂုဏ်တော်ကိုပဲ မှန်းမျှော်ပြီး သင့်တင့်လျှောက်ပတ်တဲ့ နေရာကပဲ ရှိခိုးသင့်ပါတယ်။ မွေးနေ့မှာ ငါးလွှတ်တာ သူများအသက်ကို ကယ်ဆယ်ရာ ရောက်ပေမယ့် ရေသပ္ပာယ်တာကတော့ ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်တိုင်သာ သက်ရှိထင်ရှားရှိနေသေးရင် “ငါ ချမ်းလှပြီ တော်ကြပါတော့” လို့တောင် ပြောလိမ့်ဦးမယ်။
You May Like : ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာကို ဘာကြောင့် ရတနာမြတ် (၃) ပါးလို့ ခေါ်တာလဲ
(၄) ဆုတောင်းပြည့်ဘုရားမှာလည်း ဆုမတောင်းဘူး။
ခပ်ညံ့ညံ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေက ပုဂံရောက်ရင်လည်း စွယ်တော်လေးဆူကို မွန်းမတည့်မီ ဖူးနိုင်မှ ဆုတောင်းပြည့်တယ်လို့ ထင်နေတတ်ကြသလို ဆုတောင်းပြည့်ဘုရားတွေကိုလည်း အဓိဌာန်ဝင်နိုင်မှ လိုအင်ဆန္ဒပြည့်ဝမယ်လို့ တွေးနေတတ်ပါတယ်။ မိရိုးဖလာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေက ကျိုက်ထီးရိုးသုံးခေါက်တက်ရင် သူဌေးဖြစ်မယ်လို့ ထင်နေပါသေးတယ်။ ကိုယ့်ရင်ထဲက “လိုအင်ဆန္ဒကို ငုတ်မိသဲတိုင် တက်နိုင်ဖျားရောက်” စိတ်ဓာတ်နဲ့ ကြိုးစားမှသာ အောင်မြင်နိုင်မှာပါ။ ဆုတောင်းတိုင်းသာ ပြည့်မယ်ဆိုရင် ဘုရားနားက ပန်းရောင်းနေတဲ့ လူတွေဟာ ကမ္ဘာ့အချမ်းသာဆုံးသူဌေးတွေ ဖြစ်နေမှာပေါ့။
(၅) သက်သက်လွတ်စားပြီး အဓိဌာန်မဝင်ဘူး။
သက်သက်လွတ်ပဲစားစား အသားငါးပဲစားစား စားသုံးသူရဲ့စိတ်ထဲမှာ ကုသိုလ်စိတ်ကိန်းအောင်းနေမှသာ သူတော်ကောင်းပီသမှာပါ။ “ကိုးနဝင်း မိုးလင်းမှသိမယ်” တို့ “ရက်၉ဝ အဓိဌာန်” တို့ဆိုတာ အကျိုးတရားမျှော်ကိုးပြီး လုပ်ကြတာတွေပါ။ သံပရာပင်စိုက်ပြီး လိမ္မော်သီးစားချင်လို့ မရပါဘူး။ လိမ္မော်သီးစားချင်ရင် လိမ္မော်ပင်ပဲ စိုက်ရမှာပါ။ အဓိဌာန်ဝင်တာ အလုပ်ဖြစ်မဖြစ် မသေချာပေမယ့် ဘိုးတော်ယောင်ယောင် အထက်ဂိုဏ်းတွေအတွက်တော့ ဝင်ငွေဖြောင့်လွန်းပါတယ်။
(၆) လိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာ လှူပါ။
ပြည့်နေတဲ့အိုးထဲကို ထပ်ဖြည့်နေရင် ပိုလျှံသွားရုံကလွဲပြီး ဘာမှအကျိုးမရှိပါဘူး။ မြန်မာလူမျိုတွေက တကယ်လိုအပ်တဲ့နေရာတွေကို လှူဒါန်းဖို့ထက် နာမည်ကြီးနေရာတွေကိုပဲ သဒ္ဓါထက်သန်ကြတယ်။ မလိုအပ်ဘဲ ရွှေဆိုင်းတွေကပ်လွန်းလို့ မဟာမြတ်မုနိဘုရားကြီးဟာလည်း မသပ္ပာယ်တော့သလို အင်းလေးဖောင်တော်ဦးဘုရားတွေလည်း ရွှေတုံးကြီးတွေဖြစ်သွားပါပြီ။ တကယ်လိုအပ်နေတဲ့ မိဘမဲ့ကျောင်းတွေ၊ ဆင်းရဲတဲ့ဒေသတွေကိုများ လှူလိုက်မယ်ဆိုရင် ပိုပြီးအကျိုးရှိပါတယ်။ တကယ့်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဆိုတာ ကဗ္ဗည်းထိုးဖို့ထက် အကျိုးရှိဖို့ပဲ စဉ်းစားတော့တယ်။
ကဲ . . . ဒါတွေကတော့ မိရိုးဖလာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေမှာ ရှိတတ်တဲ့ အကျင့်စရိုက်တွေကို စုစည်းဖော်ပြလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ လိုအပ်ချက်ရှိသွားရင်လည်း စာရေးသူရဲ့ စေတနာအမှားသာ ဖြစ်နိုင်တာမို့ ခွင့်လွှတ်ပေးကြမယ်လို့ မျှော်လင့်မိပါတယ်။ တကယ့်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်နေပြီလားလို့ စဉ်းစားကြည့်ရအောင်ဗျာ။
ကိုးကား ။ ။ မိရိုးဖလာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နှင့် တကယ့်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် (မေတ္တာရှင် – ရွှေပြည်သာ)
တကယျ့ဗုဒ်ဓဘာသာဝငျတှကေ ဒီလိုအကငျြ့စရိုကျတှေ မရှိဘူး
ဗုဒ်ဓဆိုတာ တရားအားလုံးကို ကိုယျပိုငျဉာဏျနဲ့ သိမွငျတဲ့သူဖွဈပွီး ဘာသာဆိုတာက ဗုဒ်ဓဟောကွားခဲ့တဲ့ တရားတျောလို့ ဆိုလိုတာဖွဈပါတယျ။ ဗုဒ်ဓဘာသာဝငျဆိုတာက ဗုဒ်ဓဟောကွားခဲ့တဲ့ တရားတျောတှကေို လိုကျနာကငျြ့သုံးတဲ့သူလို့ အဓိပ်ပာယျရပါတယျ။ မိရိုးဖလာဗုဒ်ဓဘာသာဝငျနဲ့ တကယျ့ဗုဒ်ဓဘာသာဝငျဆိုပွီး နှဈမြိုးကှဲပါသေးတယျ။ နိုငျငံသားစိစဈရေးကတျပွားထဲမှာ ဗုဒ်ဓဘာသာဝငျလို့ ရေးထားတိုငျးလညျး ဗုဒ်ဓဘာသာဝငျအစဈ မဖွဈသေးပါဘူး။ ဒီလိုအကငျြ့စရိုကျမြိုးတှရှေိနသေမြှတော့ ဗုဒ်ဓဘာသာဝငျအစဈမဖွဈသေးပါဘူး။
(၁) ဗဒေငျ၊ လက်ခဏာကိုလညျး မမေးဘူး။
ဗုဒ်ဓဘာသာဝငျဆိုတာ ကံကိုပဲ ယုံကွညျတယျ။ ကောငျးတာလုပျရငျ ကောငျးတာဖွဈမယျ၊ မကောငျးတာလုပျရငျ မကောငျးတာဖွဈမယျ။ မှေးဇာတာကိုကွညျ့ပွီး ကိုယျ့အနာဂတျကို နမိတျဖတျတာက အပွညျ့အဝမှနျနိုငျမှာ မဟုတျပါဘူး။ လကျခြောငျးတှမှောရှိတဲ့ အရေးအကွောငျးတှကေို ကွညျ့ပွီး “အသကျလမျးကွောငျး တိုနလေို့ အသကျတိုမယျ” လို့ ဆိုကွစတမျးဆိုရငျ မှေးကတညျးက လကျနှဈဖကျမပါတဲ့သူတှကေ အသကျရှငျခှငျ့မရှိတော့ဘူးလား။
(၂) နတျတှကေိုလညျး မယုံကွညျဘူး။
ကိုယျ့ကိုကြှေးမှေးပွုစုလာတဲ့ မိဘနှဈပါးကို အလေးမထားဘဲနဲ့ အတှငျး၃၇မငျး၊ အပွငျ၃၇မငျး နတျတှကေိုပဲ ပသနရေငျ မဟုတျသေးပါဘူး။ တကယျတမျးတော့ ကိုကွီးကြျောနတျတို့ မောငျတငျ့တယျတို့ မငျးကွီးမငျးလေးတို့ဆိုတာ အသတျခံရတဲ့ အစိမျးသပွေိတ်တာအဆငျ့ပဲ ရှိတာပါ။ သူတို့ဘဝတှကေို သနားရငျ အမြှအတနျးပေးဝလေို့ ကောငျးပမေယျ့ အကြိုးမြှျောကိုးပွီး ပူဇျောပသနရေငျတော့ ဗုဒ်ဓဘာသာအစဈမဟုတျသေးပါဘူး။
(၃) နနေံ့အလိုကျလညျး ဘုရားမရှိခိုးဘူး။
အင်ျဂါသားဖွဈလို့ အင်ျဂါထောငျ့မှာ ကနျတော့တာတို့ စနသေမီးဖွဈလို့ စနထေောငျ့မှာ ရသေပ်ပာယျတာတို့ဆိုတာ မဖွဈသငျ့ပါဘူး။ ဘုရားဂုဏျတျောကိုပဲ မှနျးမြှျောပွီး သငျ့တငျ့လြှောကျပတျတဲ့ နရောကပဲ ရှိခိုးသငျ့ပါတယျ။ မှေးနမှေ့ာ ငါးလှတျတာ သူမြားအသကျကို ကယျဆယျရာ ရောကျပမေယျ့ ရသေပ်ပာယျတာကတော့ ဘုရားရှငျကိုယျတျောတိုငျသာ သကျရှိထငျရှားရှိနသေေးရငျ “ငါ ခမျြးလှပွီ တျောကွပါတော့” လို့တောငျ ပွောလိမျ့ဦးမယျ။
You May Like : ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာကို ဘာကွောငျ့ ရတနာမွတျ (၃) ပါးလို့ ချေါတာလဲ
(၄) ဆုတောငျးပွညျ့ဘုရားမှာလညျး ဆုမတောငျးဘူး။
ခပျညံ့ညံ့ဗုဒ်ဓဘာသာဝငျတှကေ ပုဂံရောကျရငျလညျး စှယျတျောလေးဆူကို မှနျးမတညျ့မီ ဖူးနိုငျမှ ဆုတောငျးပွညျ့တယျလို့ ထငျနတေတျကွသလို ဆုတောငျးပွညျ့ဘုရားတှကေိုလညျး အဓိဌာနျဝငျနိုငျမှ လိုအငျဆန်ဒပွညျ့ဝမယျလို့ တှေးနတေတျပါတယျ။ မိရိုးဖလာဗုဒ်ဓဘာသာဝငျတှကေ ကြိုကျထီးရိုးသုံးခေါကျတကျရငျ သူဌေးဖွဈမယျလို့ ထငျနပေါသေးတယျ။ ကိုယျ့ရငျထဲက “လိုအငျဆန်ဒကို ငုတျမိသဲတိုငျ တကျနိုငျဖြားရောကျ” စိတျဓာတျနဲ့ ကွိုးစားမှသာ အောငျမွငျနိုငျမှာပါ။ ဆုတောငျးတိုငျးသာ ပွညျ့မယျဆိုရငျ ဘုရားနားက ပနျးရောငျးနတေဲ့ လူတှဟော ကမ်ဘာ့အခမျြးသာဆုံးသူဌေးတှေ ဖွဈနမှောပေါ့။
(၅) သကျသကျလှတျစားပွီး အဓိဌာနျမဝငျဘူး။
သကျသကျလှတျပဲစားစား အသားငါးပဲစားစား စားသုံးသူရဲ့စိတျထဲမှာ ကုသိုလျစိတျကိနျးအောငျးနမှေသာ သူတျောကောငျးပီသမှာပါ။ “ကိုးနဝငျး မိုးလငျးမှသိမယျ” တို့ “ရကျ၉ဝ အဓိဌာနျ” တို့ဆိုတာ အကြိုးတရားမြှျောကိုးပွီး လုပျကွတာတှပေါ။ သံပရာပငျစိုကျပွီး လိမ်မျောသီးစားခငျြလို့ မရပါဘူး။ လိမ်မျောသီးစားခငျြရငျ လိမ်မျောပငျပဲ စိုကျရမှာပါ။ အဓိဌာနျဝငျတာ အလုပျဖွဈမဖွဈ မသခြောပမေယျ့ ဘိုးတျောယောငျယောငျ အထကျဂိုဏျးတှအေတှကျတော့ ဝငျငှဖွေောငျ့လှနျးပါတယျ။
(၆) လိုအပျတဲ့နရောတှမှော လှူပါ။
ပွညျ့နတေဲ့အိုးထဲကို ထပျဖွညျ့နရေငျ ပိုလြှံသှားရုံကလှဲပွီး ဘာမှအကြိုးမရှိပါဘူး။ မွနျမာလူမြိုတှကေ တကယျလိုအပျတဲ့နရောတှကေို လှူဒါနျးဖို့ထကျ နာမညျကွီးနရောတှကေိုပဲ သဒ်ဓါထကျသနျကွတယျ။ မလိုအပျဘဲ ရှဆေိုငျးတှကေပျလှနျးလို့ မဟာမွတျမုနိဘုရားကွီးဟာလညျး မသပ်ပာယျတော့သလို အငျးလေးဖောငျတျောဦးဘုရားတှလေညျး ရှတေုံးကွီးတှဖွေဈသှားပါပွီ။ တကယျလိုအပျနတေဲ့ မိဘမဲ့ကြောငျးတှေ၊ ဆငျးရဲတဲ့ဒသေတှကေိုမြား လှူလိုကျမယျဆိုရငျ ပိုပွီးအကြိုးရှိပါတယျ။ တကယျ့ဗုဒ်ဓဘာသာဝငျဆိုတာ ကဗ်ဗညျးထိုးဖို့ထကျ အကြိုးရှိဖို့ပဲ စဉျးစားတော့တယျ။
ကဲ . . . ဒါတှကေတော့ မိရိုးဖလာဗုဒ်ဓဘာသာဝငျတှမှော ရှိတတျတဲ့ အကငျြ့စရိုကျတှကေို စုစညျးဖျောပွလိုကျတာ ဖွဈပါတယျ။ လိုအပျခကျြရှိသှားရငျလညျး စာရေးသူရဲ့ စတေနာအမှားသာ ဖွဈနိုငျတာမို့ ခှငျ့လှတျပေးကွမယျလို့ မြှျောလငျ့မိပါတယျ။ တကယျ့ဗုဒ်ဓဘာသာဝငျဖွဈနပွေီလားလို့ စဉျးစားကွညျ့ရအောငျဗြာ။
ကိုးကား ။ ။ မိရိုးဖလာဗုဒ်ဓဘာသာဝငျနှငျ့ တကယျ့ဗုဒ်ဓဘာသာဝငျ (မတ်ေတာရှငျ – ရှပွေညျသာ)